AC Milan oo €60m ku wada doonaysa Nikola Kalinic iyo Andre Silva – Gool FM
(Milano) 10 Juunyo 2017 – AC Milan ayaa sida muuqata tuurtay xiisihii ay u qabtey Alvaro Morata kaddib warkiisii kaddib final-kii CL, iyagoo taa biddaalkeeda wada doonaysa Nikola Kalinic iyo Andre Silva oo ay ku wada rabto €60m.
Warbaahinta Spanish-ka ayaa qoraysa in Morata uu Isniinta u duuli doono England si uu ula xaajoodo Manchester United, iyadoo uu Real Madrid u sheegay inuu ka tegeyo.
Kooxda Torino ayaa diiddey inay qiime dhimis ka samayso €100m oo ay ku doonayso Andrea Belotti, sidaa darteed bay Rossoneri ay haatan ugu weecanaysaa laba bartilmaameed oo kale si ay weerarkeeda u xoojiso.
Dalabka 1-aad, ayaa sida uu sheegayo Sky Sport Italia, wuxuu ku wajahan yahay qannaaska Fiorentina ee Kalinic oo lagu heli karo ilaa €30m, iyadoo markaa kaddib misna soo qaadanaysa weerarka soo baxaya ee FC Porto ee Andre Silva sida uu qorayo La Gazzetta dello Sport.
Silva oo 21 jir uun ah, ayaa dhaliyay 21 gool iyo 8 kale oo uu dhigay 44 kulan oo uu u saftay kooxda FC Porto fasal-ciyaareedkan, isagoo sidoo kale xulkiisa Portugal u saftay 7 gool, 9 kulan oo uu u saftay.